> Household wear>TV STAND WITH DRAWER
Ks 237,000 tax incl.
TV stand with drawer and sliding glass door. ဘေးဆွဲမှန်တံခါးနှင့် အံဆွဲပါရှိသော TV တင်ခုံ။ Size: W132*D55*H54 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၃၂၊ အနံ ၅၅၊ အမြင့် ၅၄ စင်တီမီတာ Available for big sized TV. Cable hole on back. TV ဆိုဒ်ကြီးများတင်နိုင်ပါသည်။ ၀ါယာကြိုးများကို အနောက်ဘက်အပေါက်မှတစ်ဆင့် သပ်ရပ်စွာသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။